Hutano, 06 Gunyana 2019
Chishanu 6 Gunyana 2019
Nyaya yeGukurahundi Yosvibisa Nhoroondo yaVaMugabe
Vanhu muBulawayo vatambira kufa kwevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemaonero akasiyana-siyana vamwe vachivarumbidza segamba chairo mukurwira rusununguko rwevanhu asi vamwe vachiti nyaya yeGukurahundi nehutongi hwehudzvinyiriri zvinoita kuti nhoroondo yavo isvibe.
Mapato Orangarira Vaimbove Mutungamiri weNyika, VaRobert Mugabe
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vatiwo sebato vari kushushikana nekuenda kwamupfiga nembwe kwaita VaMugabe.
Vaimbove Mutungamiri Wenyika, VaRobert Mugabe, Vashaya
Vaimbove muutungamiri wenyika, VaRobert Gabriel Mugabe, vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGleneagles Hospital chekuSingapore.
Kusaenda kubasa kwavanachiremba kwave kupararira kuzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa nehurumende kugadzirisa
Kusaenda kubasa kwavanachiremba kwave kupararira kuzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
Vatungamiriri veMalawi, DR Congo, Rwanda nevamwe vanonzi havachaenda kumusangano hwezvehupfumi hwakanangana neAfrica pamusoro pekurohwa nekupondwa kurikuitwa vanhu vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa.
Vanachiremba Vachangopedza Zvidzidzo Vanomira Kuenda kuMabasa Vachiti Havana Mari dzeKufambisa
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakanyorera zvipatara zvishanu zvikuru zvemunyika richiti nhengo dzaro dzakanga dzisisakwanisi kuenda kumabasa kutanga neChipiri.
Zvichitevera kurwiswa kwakaitwa vatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika muSouth Africa, mashoko atiri kutambira anoti paita kuwirirana muhurukuro pakati pevatyairi vemagonyeti vemu South Africa, vesangano reATDF, nevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika pamusoro pekumira kurwisana.